NgoNovemba 2021-Funda ukuRhweba
Inyanga: Novemba 2021
Uhlalutyo lwexabiso le-NZDUSD - ngoNovemba 30
Idola ibonakala ngathi ibethe yankqonkqoza ngenxa yeenkxalabo malunga nokwahluka kwe-Omicron COVID, esandula ukufunyanwa, kwaye yazisa iingozi ezinkulu kuqoqosho lwehlabathi. Ukuthengiswa kwemarike yanamhlanje kuqale kwakhona njengoko i-CEO yeModerna u-Stéphane Bancel waqikelela a "ukunciphisa kakhulu" ekusebenzeni kogonyo lwe-Omicron lwangoku.
On ihaven ekhuselekile iintshukumo, benchmark izivuno Treasury nazo ziye zehla kakhulu. Njengoko amaxabiso eoli ehla, iDola yaseKhanada ikhokelela kwiimali zeempahla ezisezantsi kwiimarike zemali. Idola itsalwa phantsi ngokuhla okubukhali kwizivuno zikaNondyebo. Kwangaxeshanye, ezona zimali zinamandla yi-Yen, i-Swiss Franc, kunye ne-Euro.
I-Eurozone CPI ngoNovemba yakhawuleza ukuya kwi-4.9% y / y, xa kuthelekiswa ne-4.1% y / y, ngaphezu koko bekulindelwe kwi-4.4% y / y, elona nqanaba liphezulu kwimbali ye-25 yeminyaka yochungechunge ... I-CPI engundoqo inyuke yaya kwi-2.6 I-% YOY ukusuka kwi-2.0% YOY, ngaphezu kokulindela kwe-2.3% YOY.
Ukujonga amacandelo aphambili okunyuka kwamaxabiso, icandelo lamandla lilindeleke ukuba libe nelona nani liphezulu lonyaka (27.4% xa lithelekiswa ne-23.7% ngo-Oktobha), lilandelwa ziinkonzo (2.7% ngokubhekiselele kwi-2.1% ngo-Oktobha). Oktobha), izinto eziveliswayo ezingezizo zamandla (2.4% ngokubhekiselele kwi-2.0% ngo-Oktobha), kunye nokutya, utywala kunye necuba (2.2% ngokubhekiselele kwi-1.9% ngo-Oktobha).
Ukwahluka kwe-omicron, ngokutsho kweFederal Reserve Chair Powell, kudala ukungaqiniseki malunga nokunyuka kwamaxabiso kwaye kungoko isoyikisa amathuba okukhula. Uxinzelelo lwentsholongwane lunokuthi luthintele ukuphindaphindeka kwakhona kwemarike yengqesho yase-US kunye nokwandisa ixesha elide ukuphazamiseka kobonelelo, olugcine uxinzelelo lwamaxabiso luphezulu. Umbuzo ophambili ngowokuba ingaba intsholongwane entsha ye-omicron iyakumisela izithintelo ezintsha zokuhamba kwaye, ukuba kunjalo ukuba oku kunokuphazamisa umgaqo-nkqubo we-Fed wokuqiniswa okanye ukunyuka kwesantya sokulibaziseka.
Njengoko iDola iyehla, iRisk Aversion Mounts
Ngaphandle kovakalelo olubi lwemarike, idola yaseMelika ilahlekelwe ngumhlaba, kunye ne-DXY yokurhweba kwi-95.78. Iimali ze-Haven zingqina ukuhamba okuninzi kwimarike yeFX. Nge-USDCHF kwi-0.9177 kunye ne-USDJPY kwi-112.80, i-yen kunye ne-Swiss franc zihamba phambili.
Oko kuthetha ukuba ukuba inani leePayrolls ezingezoFama libuthathaka kunokuba bekuxelwe kwangaphambili ngolwesiHlanu, indawo yentengiso evelayo, endaweni ye-DM zone, iya kubona inzuzo. Kwaye nayiphi na impembelelo yedola eyomeleleyo evela kwingxelo ephezulu kune-500k ngoLwesihlanu ngokuqinisekileyo iya kuthuliswa yi-omicron. Iimarike, njengezinye iiklasi ze-asethi, ziya kubukela iticker yeendaba kwizihloko ze-omicron ezintsha.
Uhlalutyo lwamaxabiso e-USDCHF-nge-30 kaNovemba
Ngethuba leseshoni yaseMelika yokuqala, i-USDCHF ibini yawela kwiiveki ezimbini eziphantsi, kunye nabathengisi ngoku bafuna ikhefu eliqhubekayo phantsi komgca we-0.9200 ojikelezayo. I-USD yaba buthathaka ngokuwa Urhulumente wase-US uvelisa, eyongeze kwintengiso yokuthengisa njengeenzuzo ze-CHF kumngcipheko okhoyo ngoku.
I-USDCHF yabethwa ngokuthengiswa okutsha ekuqaleni kosuku kwi-0.9266, kwaye yaqhubeka yawa ngenxa ye-USD esekelwe ngokubanzi ebuthathaka kwimvakalelo yomngcipheko. Ngaphandle kwesibonakaliso sokubuyisela, ixabiso lawela kwi-intraday ephantsi ye-0.9157. Indlela ekhoyo yesi sibini inokuqhubeka kude kube sekupheleni kweseshoni.
Kwimeko nayiphi na into, ikhefu elingaphantsi kwenqanaba lenkxaso ye-0.9150 liya kuthetha ukuba phantsi kwexesha eliphakathi. Ngokungabikho kwe-rebound, i-trend inokuhlala i-bearish. Ngenxa yoko, nakuphi na ukunyuka okulandelayo kwinqanaba le-0.9200 ngokuqinisekileyo kuya kujongwa njengethuba lokuthenga.
Kwi-retest ye-0.9157 ephantsi, i-USDCHF ye-intraday bias ihlala iphakathi. Ikhefu eliqinisekileyo lingabonakalisa ukuqala kokuhla okukhulu. Ukuhamba ngaphezu kwenqanaba elincinane lokumelana ne-0.9215, ngakolunye uhlangothi, unokubuyisela ekuqaleni ukuthambekela kokuwa kwindawo yokuxhasa i-0.9150 / 9175.
Ingqwalasela ikwinqanaba le-0.9157, elimele elona liphantsi lamva nje. Oku kukhusela inkxaso ye-0.9150, kwaye i-dive engaphantsi kwe-0.9150 iyadingeka ukuze wenze indawo ye-lows engaphezulu. Ukuhla kwexesha elide kunokubangela ukuthengiswa kwexesha elifutshane kwixesha elifutshane, ukuvumela i-USDCHF ukuba iphinde ibuyele kwi-0.9200.
Uhlalutyo lwexabiso le-EURCHF - ngoNovemba 30
Iibhere zigcina ulawulo njengoko i-EURCHF iphosa ngaphantsi kwesiseko senkxaso yamva nje kwi-1.04450. Emva kokuhamba ngempumelelo kwi-setup yenkxaso yokugqibela kwi-1.05400, imarike yehla ngokukhawuleza ngaphantsi kwenqanaba elilandelayo elibalulekileyo kwaye yachukumisa kwi-1.04450, apho abathengi bamisa enye i-barricade ukulawula ukuhla kwemarike. Njengakwixesha elidlulileyo, i-EURCHF yaqokelelwa ngaphezulu kwendawo kangangeentsuku ezithile kwaye yabethelwa ngokuseta ukuze igcine isantya se-bearish.
Iindawo zokuchasana: 1.09890, 1.09320, 1.08360
Iindawo zokuxhasa: 1.07010, 1.05400, 1.04550
Ulawulo lwe-EURCHF lwe-bearish luqale emva kokuba ixabiso lehla ngaphantsi kwe-1.09890 inqanaba elibalulekileyo. Ngakolunye uhlangothi, iinkunzi zeenkomo zazama ukunqanda ukuseta kwi-1.07010 kodwa zahluleka ukugcina ikhefu ngaphezu kwenqanaba lokumelana ne-1.09320. Imakethi iye yaqhubela phambili ngokuhla ngakumbi. Abathengi baye bavela ukuguqula ukuhamba kwe-bearish kwimarike kunye nenye isethi yenkxaso kwi-1.07010 kunye ne-1.05400, kodwa baye basilela kwimeko nganye.
Umzamo wamva nje wokunqanda ii-Bears ufika kwi-1.05400 kwaye oku kubangela ukubamba kweli nqanaba iintsuku ezithile, kangangokuba i-Parabolic SAR (Stop and Reverse) itshintshe amachaphaza ayo ngaphantsi kwekhandlela lemihla ngemihla ukuze ibonise ukunyakaza okuguquguqukayo. Nangona kunjalo, i-EFI (i-Elder Force Index), eye yawela kwixabiso elibi ukususela ngo-29 kaSeptemba, igcina indawo yayo. Iibhere ekugqibeleni zathatha ulawulo lwasemva kwaye zehla ngaphantsi kwendawo.
Ngexesha elifutshane, ukwehla ngaphantsi kokusekwa kwenkxaso ukuya kwinqanaba elibalulekileyo le-1.04170, okwangoku kukho ukunyuka okunyukayo njengexabiso lexabiso kwi-confluence kunye ne-midline ye-channel ehlayo. I-Parabolic SAR iye yatshintsha amachaphaza angaphantsi kwamakhandlela eeyure ze-4 ukuya kweso siphumo, ngelixa i-EFI igxininise kwinqanaba le-zero, ibonisa ezinye iinzame ze-bullish kwimarike.
Ngexesha elifutshane, i-EURCHF inokunyuka iye kumda ophezulu wesiteshi esihlayo, kodwa iibhere zigcina ulawulo jikelele okwangoku.
tags Itshathi yemihla ngemihla, EURCHF, Forex Analysis Technical, Ulindelo lweNtengiso, Price Action
Ixabiso leCardano: Inqanaba leNkxaso ye-1.46 yeNqanaba leNkxaso ngoMeyi, amaxabiso anyuswe acingelwayo
Uhlalutyo lwamaxabiso e-ADA-Novemba 30
Ukuba abathengisi benza uxinzelelo ngakumbi kwintengiso, inqanaba lenkxaso le- $ 1.46 liya kungena kwaye amanqanaba enkxaso ye- $ 1.31 kunye ne- $ 1.11 anokufikelelwa. Ukungakwazi ukwahlula i-1.46 yeedola ngamabhere kungakhokelela ekunyukeni kwexabiso kumanqanaba okumelana ne- $ 1.64, $ 1.87 kunye ne- $ 2.08.
Amanqanaba okumelana: $ 1.64, $ 1.87, $ 2.08
Amanqanaba enkxaso: $ 1.46, $ 1.31, $ 1.11
I-Cardano i-bearish kwitshathi yemihla ngemihla. Iibhere zilawulwa kwimakethe yeCardano ngaphezu kweeveki ezimbini. I-bearish momentum iyancipha ixabiso kwizinga lexabiso le-$ 1.87. Ukuncipha kwaphazamiseka ngokusekwa kwekhandlela eligubungele i-bullish elibonisa uxinzelelo lwabathengi. Ixabiso le-Cardano lihlehliselwe umva ukuvavanya kwakhona inqanaba le-$ 2.30. Emva kwe-pullback, i-bearish trend iyaqhubeka ingena kumanqanaba enkxaso ye-$ 1.87 kunye ne-$ 1.64. Ivavanya i-$ 1.46 okwangoku.
Itshathi yemihla ngemihla ye-ADAUSD, nge-30 kaNovemba
I-Cardano iphule amanqanaba enkxaso ashukumisayo kwaye ithengisa ngaphantsi kwexesha le-9 EMA kunye namaxesha angama-21 e-EMA. Ukuba abathengisi bafake uxinzelelo olungakumbi kwiimarike, inqanaba lokuxhasa i-$ 1.46 liya kungena kwaye amanqanaba enkxaso ye-$ 1.31 kunye ne-$ 1.11 inokufikelela. Ukungakwazi ukudiliza i-$ 1.46 ngamabhere kunokukhokelela ekunyuseni kwexabiso kumanqanaba okumelana ne-$ 1.64, i-$ 1.87 kunye ne-$ 2.08. Isalathiso sobuchwephesha besalathiso se-Strength Index ixesha le-14 likwinqanaba le-20 kunye nomgca wesignali obhekiselele phantsi obonisa uphawu lokuthengisa.
I-Cardano ikwi-bearish movement kwi-chart yeeyure ze-4. Iveki ephelileyo ayizange ixolelwe njengoko iCardano iye yaphantsi kolawulo lweebhere. I-bearish momentum iphosa ixabiso phantsi kwinqanaba lenkxaso kwi-$ 1.64 ngaphambi kokuba iinkunzi zeenkomo ziphendule ngokuchasene nokunyakaza kwe-bearish. Inqanaba likhuselwe ziinkunzi. Ixabiso libuyisela umva kwaye linyuke ngokubhekiselele kwinqanaba lokumelana ne-$ 1.87.
Itshathi ye-ADAUSD yeeyure ezi-4, ngo-Novemba 30
Okwangoku, kubonakala ngathi ukunyuka kwe-bearish kuya kuba buthathaka kwaye ixabiso lingabuya. Ixabiso lirhweba malunga namaxesha ali-9 e-EMA kunye namaxesha angama-21 e-EMA ngelixa i-EMA yangaphambili inqumla i-upside yamva. Isalathiso samandla ahambelanayo ixesha le-14 lingaphezulu kwamanqanaba e-50 kunye nomgca wesignali okhomba phezulu ukubonisa uphawu lokuthenga.
I-EUR/CAD Ukukhula okuPhambili kuMakhadi!
I-EUR/CAD imiphetho ephezulu emva kokuphelisa ukurhoxa kwayo okuncinci. Kwakhona, ikwazile ukuvala isithuba esibonisa ukuba iinkunzi zenkomo zomelele kwixesha elifutshane. Nangona kunjalo, kwixesha elifutshane, isibini sifikelele kwinqanaba lokuchasa, ngoko ke siya kufuna ikhefu elisebenzayo ukuze sifumane isiqinisekiso sokuba siya kuba nokuqhubekeka okungaphezulu.
Namhlanje, iMveliso yaseKhanada yeGross Domestic inokuba nesigqibo. Isalathisi soqoqosho kulindeleke ukuba sibhalise ukukhula nge-0.0% xa kuthelekiswa ne-0.4% kwisithuba sokunikezelwa kwale ngxelo. Kwakhona, i-German Unemployment Change ingaxelwa kwi-25K, ngelixa i-CPI Flash Estimate kunye ne-Core CPI Flash Estimate ingakhula ngokubhekiselele kwixesha elidlulileyo lokunika ingxelo.
EUR/CAD Uhlalutyo lobuchwephesha!
I-EUR / CAD ayiphumelelanga ukuzinza ngaphantsi kwe-1.4373 ye-pivot yeveki kwaye ngoku iye yagxuma ngaphezu kwe-1.4494 yangaphambili. Ukuqinisekisa ukuqhambuka kwayo kunokubhengeza ukukhula okunokwenzeka ngakumbi. Ngexesha elifutshane, isibini siye sancipha kancinci emva kwe-rally yayo yangaphambili kwaye emva kokungaphumeleli kwayo ukuzinza ngaphezu kwe-1.4442 yokuchasana.
Olona rhoqo lwamva nje olulandelwa yirali yangoku luqinisekise ipateni yokubuyisela umva yeDouble Bottom.
Ukuvala umsantsa okulandelwa kukunyuka okuphezulu okutsha kunokuqinisekisa ukukhula okuthe kratya kwixesha elifutshane.
tags EURCAD, ukuseta kwe-forex
IMizabalazo ye-GBP/USD Ngaphantsi kweNqanaba le-1.3345, ngoMeyi iNciphisa ngakumbi
Isibini se-GBP / USD ikwinyathelo elihlayo ukusukela ngoJuni. Ixabiso lePound liye lenza uluhlu olusezantsi oluphezulu kunye nezantsi. Ngo-Oktobha 1 ulungiso oluphezulu, abathengi abakwazanga ukugcina ixabiso elingaphezulu kwinqanaba eliphantsi le-1.3800. Ngo-Oktobha i-20 ephakamileyo ephantsi kwinqanaba le-1.3800 yayiyinqanaba elifanayo ne-15 kaSeptemba ephantsi. Abathengi abakwazanga ukugcina amandla e-bullish ngaphezulu kwelo nqanaba kungoko kuqhubekeka koxinzelelo lokuthengisa. Namhlanje, i-GBP / USD ithengisa kwinqanaba le-1.3326 ngexesha lokubhala.
I-GBP / USD iwele kwinqanaba le-35 yexesha le-Relative Strength Index 14. Isibini semali sikwindawo ye-downtrend kwaye iyakwazi ukuqhubela phambili. Imivalo yexabiso ingaphantsi komgca weentsuku ze-21 kunye ne-50-day line SMAs ebonisa ukunyuka okungaphezulu.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, isibini sikwinyathelo elihlayo. Abathengi baye bagcina ixabiso ngaphezu kwee-avareji ezihambayo kodwa bajongene nokukhatywa kwinqanaba elisezantsi le-1.3500. Okwangoku, ngoNovemba 12 downtrend; umzimba ikhandlela retraced ivavanywe 50% Fibonacci retracement. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba i-GBP / USD inokuthi iwele kwinqanaba le-2.0 isandiso seFibonacci okanye inqanaba le-1.3100.
Ezi zibini zingaphezulu kwe-40% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Iqela lestochastic lithambeka ngaphantsi kwe-50% yoluhlu lwestochastic yemihla ngemihla. Ii-SMA zeentsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 zihla zisihla zibonisa ukuhla.
Iphawundi kusenokwenzeka ukuba iyancipha ngakumbi kwicala elisezantsi. Isibini semali sijongene nolunye ukugatywa kumgca weentsuku ezingama-21 ezihamba umyinge. I-Pound inokufikelela kwinqanaba eliphantsi le-1.2900 okanye i-1.3100
I-EURUSD Kulindeleke ukuba iqhubeke nokuwa kwii-Lockdowns ezinkulu
Uhlalutyo lwamaxabiso e-EURUSD-Novemba 29
Ngexesha leseshini yanamhlanje, i-EURUSD isala ngasemva kweembangi zayo eziphambili, kunye nokuthengisa okuvelayo malunga ne-intraday ephezulu kwi-1.1311. Esi sibini sincama ezinye zeenzuzo ezenziwe ngolwesiHlanu olomeleleyo. Njengoko usulelo lusasazeka, i IYurophu kunye ne-EUR basengozini yokunciphisa imida kwiiveki ezizayo.
Amanqanaba okumelana: 1.1525, 1.1422, 1.1350
Amanqanaba enkxaso: 1.1250, 1.1186, 1.1125
I-rebound evela kwinqanaba le-1.1186 ngoku ithathwa njengento yokulungisa. Ukuba kukho ukunyuka okungaphezulu, kufuneka kukhawulelwe ekubuyiseleni kwakhona ukusuka kwinqanaba le-1.1250 ukuya kwi-1.1315. Kulindeleke ukuba kuhlanganiswe phakathi kwamanqanaba 1.1186 kunye ne-1.1350 ukulungiselela iseshoni elandelayo.
Umkhwa ombi oqale phezulu kwi-1.2266 unokuphinda uqalise emva kwexesha. Okwangoku, ukuphulwa okuqhubekayo kwi-EURUSD kwinqanaba le-1.1422 kunokunciphisa le mbono ye-bearish, okubangelwa ukwanda okukhulu ekubuyiseleni kwindawo ephezulu.
I-EURUSD ye-intraday tendency ihlala i-bearish, kunye nenkxaso yanamhlanje kufuphi ne-1.1258. Ikhefu linokuqinisekisa ukuba ukunyuka kokulungiswa ukusuka kwinqanaba eliphantsi le-1.1186 ukuya phezulu kwe-1.1329 kuphelile. Emva koko kuya kufuneka silinde kwaye sibone ukuba ixabiso liyehla nangakumbi, siphinda sivavanye inqanaba le-1.1186.
Nangona i-upside, inqanaba lokuchasana elithobekileyo ngaphezu kwe-1.1350 linokuthi linciphise i-intra-day bias kuqala. Nangona kunjalo, xa kwenzeka ukuphindaphinda, umngcipheko unokuhlala uphantsi nje ngokuba ukuchasana kwezinga kwi-1.1422 kuhlala kuhambelana. Isibini sithengisa ngaphantsi kwexesha elifutshane, ixesha elide lihlala lihlala li-bearish, ngoko ke oku kunokuba kulungiswa.